Hazo fihinanan-kanina | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Hazo fihinanan-kanina
Sakafo feno hena: ny zana-bokatra tsara indrindra
Ny fijoroana vavolombelona voalohany momba ny bitro toy ny biby fiompy efa ela no lasa, taloha ela be. Izany dia fantatra tany Roma fahiny teo amin'ny 2000 taona lasa izay. Ny fanolanana ireo biby ireo tamin'ny dingana indostrialy dia nanomboka 2 taona lasa izay. Ankehitriny, ny siansa dia mahafantatra karazana bitro 700, fa isan-taona dia mitombo io isa io noho ny fiovan'ny voa sy ny biby fiompy samihafa.
NZK: famaritana, endri-javatra, sary, fikarakarana sy fitantanana ireo bitro mena novolena
Ny famakiana ireo karazana biby isan-karazany, matetika amin'ny anarany dia azonao eritreretina hoe avy aiza izy ireo. Saingy amin'ny trondro bitika vaovao any Nouvelle Zélande - tsy izany. Betsak'i Nouvelle Zélande, izay horesahina taty aoriana, avy any Californie, Etazonia. Hahafantatra bebe kokoa momba ny bitro vaovao any Nouvelle-Zélande sy ny famaritana ny sokatra amin'ny famakiana ity lahatsoratra ity.
Bibidia Frantsay: fitaovana fambolena ao an-trano
Ny bitro dia biby kely mampihomehy izay matetika hita amin'ny anjara asan'ny biby fiompy. Amin'io sehatra io, ny endriky ny bitro, ilay ondrilahy frantsay (na lop-eared) dia maneho tsara. Ny biby dia nomena endrika tsara tarehy, toetra tony ary tsy mila fividianana lehibe.
Hyplus bitro: ahoana no hikarakarana sy ny fomba hanomezana sakafo ao an-trano
Ny iray amin'ireo kilasy mahasoa amin'izao fotoana izao dia ny fiompiana bitro. Ny orinasa dia saika tsy misy fetrany, satria sarobidy ny hena sy ny volon'ondry. Amin'ny iray amin'ireo voankazo hena, fa i hyplus hybrid cross country kosa dia hiresaka ato amin'ity lahatsoratra ity. Famaritana sy ny tsy mampiavaka ny singa iray mampiavaka ny hybrides rehetra dia ny tsy fahafahana mamokatra taranaka, fa ny vavy hyplus kosa dia ampifanarahina amin'ny fimailo amin'ny artifisialy.
Mamboly ranom-boaloboka mihetsiketsika: menaka
Matetika ny tantsaha no miantso ny biby bitro mofomamy, satria mahavoky ny hena ireo biby ireo. Amin'izao fotoana izao isika dia hiresaka momba ireo tombontsoa azo amin'ny fambolena bitro bitika, ny fiompiny manan-danja ary ny fiaviany amin'ny votoatiny. Ny tombontsoa azo avy amin'ny tsiranoka mofomamy mamelon-java-maniry Ny mitombo ny menaka, na, araka ny nantsoina ihany koa, ny bitin-katsaka dia manana tombontsoa maro: fahaterahana tsara - ny vavy dia matetika mitondra zazakely 7 ka hatramin'ny 9; ny fahatsapana haingana ny taranaka, izay mahatratra ny fitomboana tsara sy ny lanjany amin'ny 4 volana; Ny bitro dia manana toe-javatra efa hatry ny hiteraka, noho ny antony nipoiran'ny tanora tsy misy olana; ny fahaizana mampiasa bitro matotra ara-dalàna ho an'ny fifaninanana, na inona na inona vanim-potoana; Ny votoatin'ny votoatiny - afaka mitombo ao anaty cell cell; Ny fihinanana sakafo ambany dia kely, noho ny fampiasana karazany 2,5 kilao, afaka mahazo 1 kilao amin'ny lanjany velona ianao.
Pano kely fotsy: fiompiana, fikarakarana ary sakafo
Anisan'ny karazana bitin-tsakafo ao an-tokantrano ny pneonia fotsy dia manondro ny vokatra tsara sy ny endriky ny vokatra tsara. Ity dia sakan'ny sakafom-bary, izay, amin'ny fikarakarana sahaza, dia hamela anao hihinana hena tsara sy malefaka amin'ny habetsaky ny be. Ny endriky ny votoatin'ny bitro toy izany, no jerentsika ao amin'ny lahatsoratra.
Jikol bitro: misy fiompiana ao an-trano
Toeram-pambolena sy fiompiana maro tsy miankina maro no miteraka bitro amin'ny karazana hena. Ho an'ity sampana fanangonam-bokatra ity dia tena zava-dehibe tokoa ny kalitaon'ny zana-ketsa toy ny tombotsoam-bidy. Io trano io dia feno ny bitro frantsay bitro, chicol. Ny famaritana sy ny endriky ny chicol Bread isam-bolana dia sarobidy noho ny fahazoana haingon-tsakany haingana, noho izany dia ny tanjona fototra amin'ny fambolena ireo bitro dia ny sakafon'ny sakafo tena tsara.
Ahoana ny fomba hampitomboana ny bitro ho an'ny hena
Ny vazivazy fanta-daza fanta-daza momba "tsy vitan'ny felam-boninkazo, fa koa ny hena roa na telo kilao" dia tsy nilavo lefona. Ny bitro dia tena voatsindry tokoa amin'ny fividianana hoditra, ary mba hahazoana henan'aretina malefaka. Ny paingom-bavy dia tsy araka ny fangatahana ho hena, noho izany ato amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny hena mihandrona.
Famaritana sy ny toetoetran'ny zavatra bitinin'ny bitro
Mba ahafahana manana bitro, alohan'ny zava-drehetra, dia mila mahafantatra tsara ny fitsipika momba ny fikojakojana, ny sakafo, ny fikarakarana ary ny fiompiana. Ny safidin'ny bitro dia miankina amin'ny tanjon'ny fividianany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ireo singa sy fitsipika momba ny fiompiana zana-trondro alemana Motley Giant. Ny niandohan'ilay ala maoderina alemana, lolo alemà, mpanamboatra ary anarana maro hafa dia manana an'io biby io.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Hazo fihinanan-kanina